सम्राट छु चुआङ_nepal.china.com
चीनमा आत्म-संयम तथा सहनशीलतालाई निकै महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ। आत्म-संयम तथा सहनशीलताले मतभेद हटाउनसक्ने तथा मनमा शान्ति ल्याउनसक्ने विश्वास चिनियाँहरुमा छ। चीनमा "छु चुआङ च्ये यीङ" भन्ने एउटा लोकोक्ति छ। यस लोकोक्तिमा मानिसहरु सहनशील तथा संयमी भएमा उनिहरु सफल हुनसक्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ।
इसा पूर्वा सातौं शताव्दी चीनमा वसन्त राज्यकाल थियो। त्यस बेला चीनमा धेरै राज्य थिए। छु राज्यका सम्राट छु चुआङ एकजना निकै बुद्धिमान तथा दृढ स्वभावका शासक थिए। उनको शासनकालमा छु राज्य एउटा भर्खरै स्थापित सानो राज्यबाट बलियो राज्यमा परिणत हुँदैगएको थियो।
एक दिन सम्राट छु चुआङले आफ्ना उच्च पदाधिरीहरुका लागि भोजको आयोजना गरे। भोजमा रानीहरुको पनि उपस्थिति थियो। सबैले खुशी भएर भोज खाए तथा नाच-गान गरे। त्यो भोज रातिसम्म जारी रह्यो। अँध्यारो भए तापनि खुशीका कारण कसैलाई पनि त्यहाँबाट फर्कने मन मन थिएन। सम्राट छु चुआङले हलमा मैनबत्ती बालेर निरन्तर रुपमा रमिता गर्ने आदेश दिए। सम्राट छु चुआङले सबैजना संगीतमा मुग्ध भएको र रमाइरहेको देखे र उनि पनि अत्यन्तै खुशी भए। उनले आफ्ना दुइवटी रानी माइ ची तथा स्यु चीलाई पाहुनाहरुलाई अझ बढी रक्सी दिन अनुरोध गरे।
त्यति बेला अकस्मात् हावा चल्नथाल्यो। भोज-कक्षमा बलिरहेका सबै मैनबत्ती निभे। सबैना चकमन्न अँध्यारोमा परे। त्यति बेला कसैले सम्राट छु चुआङकी रानी स्यु चीको हात समात्यो। स्यु चीलाई निकै रिस उठ्यो। उनले त्यस मानिसको टोपीमा भएको सिंगार झिकिदिइन। स्यु चीले सम्राट छु चुआङ नजिक गएर सानो आवाजमा भनिन: "भर्खरै कसैले मेरो हात छोयो। मैलै उसको टोपीको सिंगार झिकिदिएँ। एक छिनपछि फेरि मैनबत्ती बालेर कसको टोपीको सिंगार छैन उसलाई दण्ड दिनुहोला।" स्यु चीको कुरा सुनेर सम्राट छु चुआङले ठूलो स्वरमा भनेः "मैनबत्ती बाल्नुपर्दैन। अँध्यारोमा रक्सी खान कति रमाइलो!" त्यसपछि सबैले अँध्यारोमै रमिता गर्नथाले। केही समयपछि सम्राट छु चुआङले भनेः "आज मसँग रक्सी खान मैले तपाईंलाई बोलाएँ। तपाईंहरु खुशीसाथ रक्सी खाइराख्नुभएको छ कि छैन?" सबै पदाधिकारीहरुले "हामी निकै खुशीयालीका साथ रक्सी खाइरहेका छौं।" भनेर जवाफ दिए। सम्राट छु चुआङले अगाडी भनेः "साँच्चै? यसो गरौं न। हामी आ-आफ्ना टोपीमा भएका सिंगारलाई झिकेर झन् रमाइलो पारौं है त।" सबै पदाधिरीहरुले लगातार आ-आफ्ना टोपीका सिंगार झिके। त्यस बेलासम्म सम्राट छु चुआङले बत्ति बाल्ने आदेश दिए। सबैले एक-अर्कालाई हेरे, त्यति बेला उनिहरुले सबैका टोपीका सजावटहरु हराइसकेका वा फुटिसकेका पाए। टोपीका आकार पनि निकै हाँसोउठ्दा भएका थिए। यसै खुशीमा सबैले हाँस्दै-रमाउँदै अझ बढी रक्सी खाए। विहानपख मात्र सबैजना पदाधिकारीहरु सन्तुष्टिका साथ घर फर्कनथाले।